Hogaanka Ururada Shaqaalaha Soomaaliya oo Tabababar loogu soo xiray dalka Rwanda – SBC
Hogaanka Ururada Shaqaalaha Soomaaliya oo Tabababar loogu soo xiray dalka Rwanda
Posted by admin on Julaay 3, 2015 Comments
Hogaanka Ugu Sareeya Xiriirka Ururada Shaqaalaha Soomaaliyeed ee FESTU ama loo yaqaano XUSS ayaa tababar loogu soo dhameeyay magaalada madaxda dalka Rwanda ee Kigali.
Tababarkan oo ay si wada jir ah usoo abaabuleen FESTU iyo Ururka Shaqaalaha Afrika ee loo yaqaano ITUC Africa ayaa waxaa ka qeyb galay hogaamiyaasha ururada shaqaale ee ku bahoobay FESTU.
Ururka Shaqaalaha Sweden ee loo yaqaano LO oo ay is kaashanayaan hay’ad la dhaho Olof Palme Centre ayaa iska kaashaday sidii ay u gacan siin layaaheen Xiriirka Ururada Shaqaalaha Soomaaliyeed oo ah ururka shaqaalaha ee ka jira dalka ee adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay.
Madaxa Xiriirka Arrimaha Dibada ee LO Mr Leif Isaksson ayaa aad ugu riyaaqan dadaalka ay FESTU ugu jirto sidii ay usoo nooleyn laheyd urur xoog badan oo ay leeyihiin shaqaalaha Soomaaliyeed kaasoo difaaca Xuquuqda iyo danaha shaqo ee shaqaala weynaha Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa tababarkan oo ka dhacay Kigali taariikhdu marka ay aheyd 22ka ilaa 25ka June ayaa khudbad waxaa ka jeediyay Mr Joel Odigie oo ah masuul sar sare ee ITUC Africa. Joel waxaa uu si buuxda ugu cadeeyay FESTU in ururada shaqaalaha Afrika ay si buuxda u taageersan yihiin FESTU iyo hogaankeeda ayna la garab istaagi doonaan taageero dhinac waliba ah.
Guddoomoiyaha FESTU Axmed Cusmaan Saciid iyo Xoghayaha Guud ee xiriirka Cumar Faaruuq Cusmaan ayaa aad ugu mahadceliyay LO, ITUC Africa iyo Olof Palme taageerada lama iloobaanka ah ee ay siyeen FESTU iyo dhamaan ururada ku bahoobay.